President Robert Mugabe Videos at ABC News Video Archive at abcnews.com
Back to Robert Mugabe
FILE - In this Friday, April, 18, 2008 file photo the then Zimbabwean President , Robert Mugabe , waits to deliver his speech during the 28th Independence Celebrations in Harare. Mugabe, 94, told South ...
FILE - In this Friday, April, 18, 2008 file photo the then Zimbabwean President, Robert Mugabe, waits to deliver his speech during the 28th Independence Celebrations in Harare. Mugabe, 94, told South African broadcaster SABC in the broadcast aired Th
In this file photo taken Saturday, Feb. 28, 2009. Zimbabwe's President Robert Mugabe eats birthday cake during his 85th birthday celebrations in Chinhoyi, Zimbabwe. In the early days following the ...
In this file photo taken Saturday, Feb. 28, 2009. Zimbabwe's President Robert Mugabe eats birthday cake during his 85th birthday celebrations in Chinhoyi, Zimbabwe. In the early days following the end of white minority rule in 1980, President Robert
In this Wednesday, Dec. 13, 2017, photo, potential buyers browse a cattle auction in Gomoza village in Zimbabwe. Some rural Zimbabweans still hadn't heard the news of Robert Mugabe's dramatic ...
In this Wednesday, Dec. 13, 2017, photo, potential buyers browse a cattle auction in Gomoza village in Zimbabwe. Some rural Zimbabweans still hadn't heard the news of Robert Mugabe's dramatic resignation last month, and that lack of infrastructure ch
FILE -- In this Friday June, 2, 2017 file photo, Zimbabwe's President Robert Mugabe , left, and his wife Grace attend a youth rally in Marondera, Zimbabwe. Zimbabwe's presidential spokesman says that ...
FILE -- In this Friday June, 2, 2017 file photo, Zimbabwe's President Robert Mugabe, left, and his wife Grace attend a youth rally in Marondera, Zimbabwe. Zimbabwe's presidential spokesman says that former president Robert Mugabe and his wife Grace h
More Robert Mugabe NewsMore Robert Mugabe Videos